Iskuulka Islaamiga ah ee Römosseskolan oo dhinac kale looga dheggan yahay (Dhegeyso) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Iskuulka Islaamiga ah ee Römosseskolan oo dhinac kale looga dheggan yahay (Dhegeyso)
Iskuulka Islaamiga ah ee Römosseskolan oo dhinac kale looga dheggan yahay (Dhegeyso)
(Gothenburg) 17 Nof 2021 – Dhamaanba 3-da iskuul ee hoos taga Römosseskolan ee magaalada Göteborg ayaa laga saari karaa guryaha ay deggan yihiin dhaqaale xumo darteed.
Dugsiyada Römosseskolan ayaa lagu leeyahay lacago kiro ah oo gaaraya 700,000 oo karoon, taasoo keeni doonta in guryahaa laga saaro haddii aanay si iskood ah uga guurin, sida uu sheegay Axel Darvik (L).
Yeelkeede, qarreenka u doodaya Römosseskolan ayaa rumaysan in lacagaha kirada ah ee laga doonayo iskuulka loo goosan karo lacagta uu iskuulka laftiisu ku leeyahay Maamulka Göteborg taasoo gaaraysa dhowr milyan oo karoon.
Dhanka kale, 470 ka mid ah 600 oo arday oo iskuulladan dhiganaysey ayaa haatan aqbalay inay u wareegaan dugsiyada uu maamulo kamuunka Göteborg oo sheegay inay boosas ardaydaa u diyaarinayaan si ay Isniinta soo socotaba iskuullo cusub u bilaabaan, sida uu sheegayo Axel Darvik.
Previous articleDAAWO: Jaamacadda Azhar oo ka digtey “diin cusub” oo qorsheheeda la wado (Dowlad ka jirta dal Muslim ah oo ku lug leh)
Next articleBARIGA DHEXE: Min dib-qalloocyo, daadad, dhir gubanaysa ilaa dhul-gariir & dhagxaan baraf ah oo cirka kasoo dhacaya (Daawo inta dal ee dhibku ku dhacay)